1. Ọtụtụ ndị mmadụ na-achọ ihe nzuzo zuru oke. Ocheeze nke okorobịa Site n'inwe ezigbo ọdịdị iji tufue abụba afọ. Na mgbakwunye na iweghachi onye ntorobịa ahụ Tinye mmekọahụ na-eyi uwe ndị zuru oke n'ụdị ọ bụla. Ọzọkwa ezigbo ahụike Na ọ dịghị onye nwere ike inye anyị ma e wezụga onwe anyị Taa anyị nwere usoro dị mfe, mana ọ chọrọ obere ndidi na ịdọ aka ná ntị. Ọ bụrụ na ị gafere ya, a ga-ekwe gị nkwa na ọnụ ọgụgụ gị mara mma ga-alaghachi n'ezie.
2. Na-a aụ nnukwu iko mmiri dị ọcha tupu ị rie nri ọ bụla? Usoro a, na mgbakwunye na ime ka akpụkpọ gị maa mma Usoro excretory Na-enyere anyị aka mejupụta n'ụzọ na-enweghị atụ ngwa ngwa N'ihi na mmiri bụ akụkụ dị mkpa nke ahụ Nwee ume ọhụrụ n'ụbọchị Na ị drinkingụ mmiri 5 - 10 nkeji tupu eri nri ọ bụla. Na-emekwa ka anyị na-a drinkụ ngwa ngwa karịa N'ihi na ebubatara mmiri n'ime ite n'ihi nri mbụ Ma ekwesịrị m ime ka ọ bụrụ omume m mgbe niile.ị hụrụ etu esi efunahụ abụba n'afọ? O siri ike
3. Họrọ iri N'ụzọ kwere nghọta bara uru Mgbe afọ bidoro ịbịa Ọ na-egosi na elebara nri anyị na-ahọrọ anya n’ụzọ dị iche iche, nri? Ọ dị mma, na-amalite mgbe niile. Na nhọrọ nri ejiri nlezianya, nke dị mkpa maka ụzọ ọnwụ abụba afọ Ihe mbụ bụ ịhapụ ị fromụ mmanya ọtọ bịrịbịrị. Akwa-desserts Rie nri starch dị obere. Ma ọ bụ gbanwee na ntụ ọka bara uru dị ka ọka dum Ma ọ bụ achịcha, achịcha ọka wit na-edozi oke na nri ọ bụla Ọ bụrụ na ọ bụ osikapa, mgbe ahụ, otu ladle na nri ọ bụla. Tinye nri protin di nkpa iji mezie ebe ndi mebiri emebi. Na nri ndị nwere eriri Echefula na ihe oriri na-arụ ọrụ maka ahụ gị. Ọ bụ mgbe a pụrụ ịdabere na see okwu. Ka anyị họrọ iji nweta ihe bara uru n'ime ahụ site taa ka mma.
4. Họrọ mmega ahụ masịrị gị ma na-eme ya oge niile, ọtụtụ narị mmadụ anaghị enwe mmega ahụ n'otu ụzọ ahụ. N’ihi ya achọghị m ilekwasị anya na nke ahụ Ọ ga-abụ mmega ahụ ọ bụla ma ọ bụ ụdị mmega ahụ, naanị rịọ ka ọ bụ mmega ahụ masịrị anyị. Ma mee ya mgbe niile, ụbọchị 3-5 n'izu, dabere na mma Ma ga-eme n'usoro maka ihe karịrị 30 nkeji na 1 hour dabere na afọ na ahụike nkịtị Somefọdụ ndị dị ka ịga ije, ịgba ọsọ, yoga, ịgba egwu, ịgba ịnyịnya ígwè, igwu mmiri, kadị, wdg. M na-ekwu na ọ bụrụ na ha na-eme ya mgbe niile. Na agwa ndị ọzọ Maka otu esi belata abụba afọ Enweghị ọsọ ọsọ A ga-eji nwayọọ nwayọọ belata abụba na afọ, gbasiri ike Na amamiihe dị ka ihe doro anya
5. Nwee nchekwube Belata nrụgide Na-eme ka ike gị na EQ dịkwuo mma. Nke a bụ ihe kacha sie ike ịme. N’ịgbalị ịchịkwa echiche, mmetụta uche, ma ọ bụ nchekasị Ọ bụrụhaala na anyị bụ mmadụ na ịdị ndụ Ma gbalịa ịghọta ihe N'ụwa na ọ dịghị ihe doro anya Obi ụtọ dị na anyị n'oge na-adịghị anya. Ahụhụ na-abata n’oge na-adịghị anya. Nsogbu ọ bụla nwere ihe ngwọta, naanị mara. N'oge ezumike Nye onwe gị ume dị mma Hapụ ibu na nwa oge ma lekwasị anya na ilekọta ahụ gị mbụ. Ekwela ka nrụgide mebie anyị. Ihe na-akpasu gị iwe karịa ka ị na-eri Ka a na-ekwusi ike, otú ahụ ka iwe na-ewe Karịsịa, nrụgide bụ Onye iro na ahụike anyị n’ụdị ọ bụla
6. Dị mfe, ọ naghị esiri gị ike, n'ezie, ọ na-elekọta onwe gị. Na-abịa hụ onwe gị n'anya na-enye onwe gị ihe ọma ọzọ Ma chọrọ mmega ahụ N'ihi na ezi ahụike abụghị maka ire ere Ọ bụrụ na ịchọrọ, ị ga-eme ya n'onwe gị.